Ugu Weyn Ee Succulents
Dheeriga Aloe - waa maxay sifooyinka isticmaalka dhirta ee daawada
Dheeriga Aloe iyo Vero waa laba dhir oo kala duwan, inkastoo ay ka mid yihiin cirrid isku mid ah, waxay ku kala duwan yihiin muuqaalkooda, halabuurka iyo codsiga. Aloe caadadiisu waa geed geed, kaas oo sidoo kale loo yaqaan "agave". Vero Aloe waa noocyo dabiici ah oo aan qaabeynin geed dabeecad u eg, iyo taarikada caleemaha waxay ka soo baxaan colka xididka (rosette).
Sidee loo xanaaneeyaa kakoobka guriga?
Tani maaha in ay suurtogal tahay in ay sharaxdo dhamaan noocyada xakameynta adduunka ee hal mawduuc - ay jiraan qiyaastii 5,000 nooc, sidaa daraadeed mawduucani wuxuu tixgelinayaa kuwa ugu xiisaha badan ee uruurinta guryaha, wuxuu tilmaamayaa sifooyinka botanical iyo xeerarka daryeelka iyo beeraha. Qeexitaanka Botanical iyo noocyo Erayga Giriigga "cactus" ayaa horay loo isticmaalay in lagu tilmaamo dhirta aan la aqoon.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Succulents 2020